आज फेरी घट्यो सुनको मुल्य, तिन दिन देखी लगातार ओरालो लाग्दै सुनको मुल्य कतिमा कारोबार हुदैछ आज ? हेर्नुहोस् – Khabar Silo
Posted on October 17, 2021 Author khabar silo Comment(0)
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले घटेको छ । छापावाल सुन बुधबार प्रतितोला रु ८८ हजार ९०० मा कारोबार भएको थियो ।नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार ७०० तोकिएको छ ।
तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८८ हजार २५० कायम गरिएको छ जुन बुधबार प्रतितोला रु ८८ हजार ४५० मा कारोबार भएको थियो ।महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य बुधबारको तुलनामा आज प्रतितोला रु ३५ ले घटेको छ । बुधबार प्रतितोला रु एक हजार १५५ मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार १२० तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन चाँदी कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा महासङ्घले सुन तथा चाँदीको मूल्य तोक्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यतिखेर सुन प्रतिऔँस एक हजार ७३२ दशमलव ७२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।(रासस)काठमाडौं । आउने साउन दुई गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रजिअ निरौलाले भने, ‘कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा हुन सक्छ। हालसम्म प्रशासनले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। हामी असारको ३०/३१ गते बसेर यस विषयमा छलफल गर्छौं।’
कोरोनाको पछिल्लो स्थिति के छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको संक्रणदर बढ्दो क्रममा छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार १ सय बढी संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयले सर्वाजनिक गरेको रिपोर्टमा १ हजार ३ सय ५३ जना पीसीआर परीक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका थिए भने ८ सय १६ जना एन्टिजेन परीक्षणबाट संक्रमित थपिएका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित ९ जिल्लामा ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालया अनुसार प्रदेश १ का मोरङ, झापा र सुनसरी, वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर र गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ५ सय बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार २५ जिल्लामा २ सयदेखि ४सय ९९ सम्म कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने अन्य जिल्लाहरुमा १ देखि १ सय ९९ जनासम्म सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हालसम्म शून्य संक्रमित कुनै पनि जिल्लामा देखिएको छैन।
काठमाडौंमा जम्मा ५ हजार ३ सय ३५ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै भक्तपुरमा १ हजार २४ र ललितपुरमा १ हजार २ सय २३ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत २४ घण्टामा काठमाडौंमा ३ सय ३ जना, भक्तपुरमा ५१ जना र ललितपुरमा ६० जना कोरोनाका संक्रमितहरु थपिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अझै पनि कोरोनाको महामारी कम नभएको भन्दै सजग रहन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर कुमार अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्दै सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्।
निषेधाज्ञापछि अफिस खुलेकाले अफिसजाँदा र घर जाँदा अपनाउनु पर्ने सतर्कता भिडियोबाट जानकारी गराइएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्ड सधै अपनाउन् पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ
रानीपोखरीमा पानी [ फोटो फिचर ]
Posted on June 8, 2020 Author khabar silo
२६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंको रानीपोखरीमा पानी जम्मा हुन थालेको छ । यद्यपि रानीपोखरी पुनर्निर्माण सकिएर पानी हालिएको भने होइन । २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पानी फालेर पुनर्निर्माण थालिएको थियो । लामो समयसम्म गति लिन नसकेको पुनर्निर्माणले अहिले गति लिएको छ र भुइँमा कालो माटो र इँटा बिच्छ्याइएको थियो । वरपरको पर्खाल बनिरहेको छ […]
कोरोना त्रास : निषेधाज्ञामा आजदेखि थप कडाइ
१५ जिल्लामा पूर्ण र तीन जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा काठमाडौं : निषेधाज्ञा जारी भएका विभिन्न जिल्लामा आजदेखि थप कडाइका साथ आदेशको कार्यान्वयन गरिने भएको छ। अन्य जिल्लाबाट आदेश जारी भएका जिल्लामा यातायातका साधन तथा अन्य मानवीय आवागमन रोक्न भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार पहिलो दिन भएकाले यातायातका साधनहरू बाटोमै अड्किएका, यात्रु अलमल भएकाले केही सहजीकरण […]
काठमाडौं – भारत सरकारले लकडाउनकै बीचमा मंगलबारदेखि रेलसेवा सञ्चालन गरेलगत्तै भारतका विभिन्न राज्यमा रोजगारीका लागि गएका झन्डै १ लाख मजदुरले नेपाल भित्रने तयारी गरेका छन् । सम्भवत दुई–तीन साताभित्र उनीहरु नेपाल आउन सक्ने जनाइएको छ । उनीहरु नेपाल भित्रिएसँगै सरकारले बोर्डर क्षेत्रमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसकेमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह हुन […]